Accueil > Gazetin'ny nosy > HVM
Manomboka ny fizarana vola maloto
Efa nambaranay teto matetika fa ho feno hosoka sy haloto ny fifidianana filoham-pirenena izay hatao amin’ny taona 2018. Hita taratra amin’izany ny fividianana ny mpifidy sy ny hala-bato ary ny fampiasana fahefam-panjakana izay voararan’ny lalàna sy ny demôkrasia ary ny fenitra ny firenena repoblikanina.
Ny fampiasana vola tsy hita fototra ary tsy mazava fihaviana ka zarazaraina amin’ny fomba mazava dia lazaina fa vola maloto avokoa. Matetika dia avy amin’ny volam-panjakana nahodinkodina, na ny fahazoana vola tsy fantatra anarana amin’ny mpanam-bola mikendry hahazo tombotsoa manokana, na koa ny famotsiam-bola avy any ivelany na avy eto an-toerana izany. Ny fotoana ny fanomanana ny fifidianana toa izao no mazana ahitana izany.
Amin’izao fotoana izao ary dia mizara vola amin’ny alalan’ny asa tana-maro amin’ny alalan’ny HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara) tamin’ny tanàna tao Manakara, Moramanga, Antananarivo tamin’ny fanadiovana teny Itaosy . Volabe no voalaza fa nanaovana izany asa izany. Vola avy aiza ireo? Raha ny volan’ny mpikambana amin’ny alalan’ny latsakemboka dia tsy misy mpikambana mandoa izany vola izany ao hatramin’izao fa mieritreritra ny hahazo ny vola aza. Tsy mazava ny volan’ity antoko ity. Ireo rehetra ireo dia nitranga tamin’iny herinandro lasa iny avokoa.
Tsy izany ihany fa any Ambositra indray dia nizara vary maimaim-poana ho an’ny fianakaviana mahantra ny filohan’ny Faritra izay voalaza avy tamin-dramatoa minisitra mpiahy ity faritra ity Rasoazananera Marie Monique sy ny antoko HVM. Tsy ny ao Ambositra ihany no nomena fanomezana fa ny zokiolona any Manandriana koa. Tsy misy loza voajanahary na nataon’olombelona nefa tampotampoka teo dia hozaraina vary ny olona. Amam-polony taonina maro no vary nozaraina amin’izany ary mbola hisy ho avy koa hono. Tsy misy maharatsy izany ary tokony hanao be be kokoa noho izao aza ireo mpitondra fanjakana ireo fa tokony hazava tsara ny fiavian’ny vola zarainy sy ny vary amin’izany. Tsy tokony ho fanararaotana ny fahantran’ny vahoaka koa no hatao fa fanomezana azy tan-tsoroka hialany amin’ny fahantrana no nataon’izy ireo tao anatin’ny efa-taona nitondrany izay.
Mbola azo lazaina fa vola maloto koa no zaraina amin’izany raha ny fanazavana notanisaina ery ambony ireo no arahina.
Tokony ho malina ny vahoaka ankehitriny satria akaiky ny fifidianana ka manao izay hahazoana vahoaka sy hamitahana indray ny fanjakana HVM mba hambaboana ny vahoaka nampahantrany lalina izao. Mbola ho avy koa ny “Tee Shirt” sy vola maimaim-poana aoriana kely ao. Ny tambin’izany fizarana ataon’ny HVM izany dia ny vonoan’olona sy ny halatr’omby, ny asan-dahalo, ny asan-jiolahy, ny doro-trano isan-karazany mihatra amin’ny olona amin’izao fotoana izao, toa ny famitaham-bahoaka nahazo tamin’ny fifidianana tamin’ny taona 2013 iny ihany.
Tokony ho mailo sy hitandrina mafy ny Malagasy eo anatrehan’izao fitaka bevava ataon’ny HVM izao.